ukukhishwa kwamuva ukushaya i-apula; uhlelo lokusebenza lwefoni lumiswa ku-iphone 7, iphone 6s ne-iphone 5s
none Izindaba Nokubuyekezwa Ukukhishwa kwakamuva ukushaya i-Apple; uhlelo lokusebenza lwefoni lumiswa ku-iPhone 7, i-iPhone 6s ne-iPhone 5s
Ukukhishwa kwakamuva ukushaya i-Apple; uhlelo lokusebenza lwefoni lumiswa ku-iPhone 7, i-iPhone 6s ne-iPhone 5s
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, lapho kuzwakala sengathi ama-Samsung Galaxy Note 7 & apos; aqhuma kwesobunxele nangakwesokudla, i-iPhone icishe yaba ne-halo ezungeze yona ngokuqhathanisa. Kepha muva nje, i-handset yesithonjana se-Apple & apos ibilokhu ibhekene nezinkinga zayo. Amanye amayunithi we-Apple iPhone 6 anjalo unenkinga yokurekhoda okokufaka esikrinini, okuholele ekufayilisweni kwecala lesenzo lesigaba ngokumelene ne-Apple. Lokho okubizwa nge-Touch Disease ingalungiswa yi-tech titan ngo- $ 149 .
Ngokwengeziwe, amanye amayunithi we-Apple iPhone 6s akhiqizwa phakathi kukaSepthemba no-Okthoba 2015 kucisha ibhethri lisuka ku-30% liye ku-0% ngokuphazima kweso. Ungahlola iwebhusayithi yokusekela yama-Apple & apos; bona ukuthi unelungelo yini lokushintshwa ibhethri lamahhala .
Inkinga yakamuva nge-iPhone kudingidwe ngayo esithangamini se-Apple Support Communities. Lapho, abanikazi be-Apple iPhone 7, i-iPhone 6s kanye ne-Apple iPhone 5s bakhala ngokuthi uhlelo lwabo lwefoni lubandayo. Lokhu kubavimba ekwenzeni nokuthatha izingcingo, noma ukuphatha eminye imisebenzi ehlobene nefoni. Kubukeka sengathi kwabaningi, le nkinga iqale ngemuva kokuvuselelwa ku-iOS 10.1. Kwabanye, inkinga ize nokuvuselelwa kwe-iOS 10. Ukusetha kabusha kweSoft neFektri akusizi.
'Ngine-iPhone7 entsha. I-APP yefoni ivame ukuba yiqhwa futhi ingidinge ukuthi 'ngivale kanzima' uhlelo lokusebenza ngokuchofoza kabili inkinobho yasekhaya nokuswayipha. Ingabe lolu udaba olwaziwayo? Ngabe ukhona owaziyo ukulungisa? Isoftware yami isesikhathini iOS 10.1.1'-Isikhalazo esivela ku-iPhone 7 yomsebenzisi we-BingoBones
I-Apple kusamele iluvume lolu daba, kepha inkampani ekuqaleni yenze okufanayo ngeTouch Disease kanye nezinkinga ezibizwa nge- #BatteryGate. Kuyathenjwa ukuthi i-iOS 10.2 izoyilungisa le nkinga. Khona manje, Kusatshalaliswe i-iOS 10.2 Beta 5 konjiniyela namalungu ohlelo lwe-beta lomphakathi, okusho ukuthi i-iOS 10.2 iseduze.
Abanye abasebenzisi be-iPhone baye bagcina uhlelo lwabo lokusebenza lwefoni lubanda lapho bebuyekezela ku-iOS 10.1
umthombo: I-AppleSupportCommunities nge Forbes
Usuku lokukhishwa lwe-iphone 11 pro max
ungawina kanjani i-slither io
Idili: Thola i-iPhone 8 yamahhala kwi-AT & T (kusebenza imigomo nemibandela)
I-Spotify vs Apple Music vs Tidal vs YouTube Music
I-Google ingeza amakhono amasha okulungisa isipelingi nohlelo kuhlelo lokusebenza lwe-Gmail
Nakhu ukuthi ungalanda kanjani i-Pokémon Go kudivayisi yakho ye-iOS noma ye-Android noma ngabe uhlala kuphi
I-Call of Duty vs Ukuqhathanisa kwePubG: iyiphi enempi engcono?
I-Apple yandisa ukuhweba kwe-iPhone ngenani ngo- $ 15 kumamodeli ahlukahlukene
I-smartwatch yakwaSamsung Gear S2 inamahemuhemu okufaka i-nano SIM card
Ungayivula kanjani i-iPhone yakho ephuke ejele ngezinyathelo eziyi-12 ezilula